Otu esi akụziri nwa ka ọ ṅụọ na iko | Bezzia
Otu esi akụziri nwa gị ka ọ ṅụọ na iko
Maria José Roldan | 14/05/2022 12:24 | Nwa
Na nwa ọhụrụ na-achịkwa ịṅụ ihe ọṅụṅụ site na iko bụ ezigbo ihe ịga nke ọma nke kwesịrị ka a nyochaa mgbe niile. Ewezuga mmepe dị mkpa site na echiche ntozu okè, omume nke ịṅụ mmanya na-egosi ọganihu mmetụta uche maka onye nta. Ndị ọkachamara na-atụ aro iwepụ karama ahụ tupu afọ abụọ iji zere nsogbu ọnụ n'ọdịnihu.
N'isiokwu na-esonụ anyị na-enye gị ụfọdụ ntụziaka nke nwere ike inyere gị aka ịkụziri nwa gị ka ọ ṅụọ n'ime iko.
1 Rie nụ ezinụlọ
2 Jiri iko mmụta
3 Gwuo egwuregwu akwụkwọ ntuziaka
4 ikpeazụ nzọụkwụ
Rie nụ ezinụlọ
Mgbe ị na-akụzi otú e si aṅụ ihe ọṅụṅụ site na iko, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iri nri dị ka ezinụlọ. Ụmụaka na-amụtakarị ihe site n'iṅomi ndị mụrụ ha. ya mere ọ dị mma ịṅụ mmanya n'ihu onye nta. Ewezuga inyere gị aka ị drinkụ mmanya n'onwe gị, iri nri dị ka ezinụlọ gụnyere ịkụzi àgwà ọma site n'oge ọ bụ nwata.
Jiri iko mmụta
Ọ gaghị ekwe omume ime ka à ga-asị na nwa ọhụrụ na-amụta ịṅụ ihe ọṅụṅụ site na iko ozugbo na bat. Nke mbụ, ị ga-enye ya otu iko mmụta. A na-emepụta ụdị iko a maka ụmụ ọhụrụ dịka ọ nwere mkpuchi na-adịghị na-eme ka ọ dị mfe ijide ya n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọtụtụ ndị nne na nna na-emehie nnukwu ihe nke ikwe ka iko mmụta bụrụ nke ikpeazụ.. Ọ bụ ezie na ọ bụ iko dị mma karịa ndị nne na nna ebe ọ bụ na ọ na-esichaghị ike. Ụgbọ mmụta ahụ ga-enwerịrị ọrụ bụ isi nke ịbụ ụgbọ ngbanwe gaa n'ihe ga-abụ arịa ikpeazụ.
Gwuo egwuregwu akwụkwọ ntuziaka
N'oge a na-aṅụ mmanya na-enweghị nsogbu ọ bụla na iko nkịtị, nwa ahụ ga-enwe ụfọdụ dexterity n'aka. Maka nke a enwere ụfọdụ egwuregwu nka aka na-enyere aka kpalie mmegharị aka. Ihe ọ bụla na-aga nke mere na onye nta ahụ na-ejide iko ahụ nke ọma.
Ozugbo nwatakịrị ahụ na-edozi n'enweghị nsogbu ọ bụla na iko mmụta, ọ bụ oge kwesịrị ekwesị iji nye ya iko ikpeazụ. Ọ kacha mma inye ya iko plastik ka o wee malite ịmara onwe ya n'enweghị nsogbu ọ dịghịkwa ihe ize ndụ nke ịgbaji ya. Cheta na onye nta ahụ na-amụta ihe, n'ihi ya, ọ bụ ihe na-emekarị ka ọ wụsa mmiri na mbụ. Ndị nne na nna aghaghị iji ndidi mee onwe ha ihe n'ihi na ọ bụghị ihe a pụrụ ime n'otu abalị. Na omume na ka oge na-aga, onye nta ahụ ga-enwe ike ịṅụ mmanya na-enweghị enyemaka nke onye ọ bụla.
Na nkenke, usoro ịṅụ mmanya si na iko dị iche iche maka nwa ọ bụla. O nwere ụfọdụ ndị na-enweta ya n’obere oge na ndị ọzọ na-esiri ike. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nwee ndidi, nweekwa obi iru ala. Ọ dịghị mkpa ka ọ dị ngwa ngwa n'oge ọ bụla ebe ọ bụ na ọ bụ ihe a na-aghaghị ime n'enweghị nrụgide. Ihe dị mkpa bụ na nwatakịrị ahụ nwere ike ịṅụ mmanya n'onwe ya ma too ya mgbe ọ gara nke ọma. Ịṅụ mmanya site na iko bụ ọkwa ọzọ na mmepe ụmụaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Nwa » Otu esi akụziri nwa gị ka ọ ṅụọ na iko
Anaemia: mgbaàmà ndị ọzọ ị kwesịrị ịma
Greenwashing, omume ịre ahịa "acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ".